Ukuba uvuthiwe ukuthengwa kwesikhwama, ufike kwisigqibo sokuba ugqoke izinto emva kwakho, kwaye kungekhona ezandleni zakho. Kwaye oku akunakwenzeka ukuphikisana. Kuhlala kuphela ukufumanisa indlela kwaye yintoni na isikhokhelo samasetyhini esinokuzikhethela esi sixeko.
Yisiphi isikhwama esingakhetha kuyo esi sixeko?
Njengomthetho, iindawo zokukhusela ezisezidolophini zinomthamo ophakathi. Iimodeli ezihamba phambili zibancinci ububanzi kwaye ziphakame ngokukhawuleza - ezi zilinganiso zikulungele kwaye zivumele ukuba uhambe ngokukhululekile ezitalatweni ngethuba lokukhawuleza, xa izihlwele zabantu zikhangela.
Unokukhetha njani isikhwama sesikhwama somhlaba, xa uthengisa uluhlu olukhulu kangaka? Iimodeli zesifazana zininzi. Ngoko ke, ukhetha ukhetho ngokwakho, kuyafaneleka ukubeka ingqalelo kwezinye zezinto ezinokuthi:
kufuneka ube nokufikelela okulungileyo kwizinto ezikuyo;
umgangatho omhle wezinto eziphathekayo;
Ngokuqhelekileyo, iipokethi ezikwidolophu ezisemgangathweni, ezinokubambisa amehlo zisebenzisayo nje nje ngefestile, izinto eziphathekayo. Ngoko ke, abaxhomekeke kwiimfuneko eziqinileyo, njengokuba, ngokomzekelo, ubukho befayile ekhethekileyo ye-anatomical insert.
Kodwa abaninzi abaqapheliyo banikezela umgangatho wezinto ezivela kuzo iintaka zokugada. Ngoku zenziwe nge "cordura" kunye ne "nylon" kunye ne-polyurethane impregnation, enika iimpawu zobungqina bomswakama.
Kwakhona kwimveliso yeekwesikhwama usebenzisa umbane ongenamanzi, ngoko ke nangona uwela phantsi kwemvula, unako ukuzola - zonke iziqulatho ziya kuhlala zihambelana.
Umbala wamantombazana uyona nkcukacha ebalulekileyo, kwaye ukhetho lwakhe alukwenzeka ngokukhawuleza. Ukuthatha umbala, qhubeka kwindlela yakho eqhelekileyo kunye nezinto ozikhethayo. I-backpack yase-Urban kufuneka ihlanganiswe kungekhona nje ngeempahla zakho, kodwa nayo ifane nomfanekiso ngokubanzi.
Yintoni enxiba izitya?
Jack Quinn Jacket
Isitayela selizwe kwiingubo
Yintoni enxiba ngayo ingubo?
USelfi - ukuthini oku kuthetha ntoni?
Ifuna ukudubula kwesithombe epakini
Yintoni enxiba ngayo i-kyuloty?
Indlela yokujonga kakuhle?
Yintoni enxiba phezulu?
Ingwe enkulu yengubo - kunye nento yokugqoka?
Kwenzeka njani ukuba imfashini ngoku ukugqoka amantombazana?
Ummeli uKeely Kuoko udibana nomnye umdlali
Uphawu - iqhosha laphuma
Uluhlaza kangakanani uVladimir Solovyov?
Yintoni enxiba ibhulukwe ngokuprintwa kweentyatyambo?
Isaladi yamaGrike ngeeshizi
Izicathulo zaseSwitzerland zamantombazana eziselula
Kutheni ndilinamazinyo ezibolileyo?
Yilokho ongeke udideke ngayo!
Ungazikhusela njani ekukhulelweni okungafunekiyo emva kwesenzo?
Umfazi wase-yogurt - njani ukhetha?
Umqondiso - i-bat yafika
I-Soup - solyanka - recipe
Ukushisa okusemgangathweni kwi-ovulation
Kutheni uphupha i-roses ebomvu?
Umthunzi ongapheliyo wokuhlaselwa kwintsimi
Ukuphila ngakumbi kunabo bonke abaphilayo: i-Nokia 3310 eyimfihlakalo ibuyele!
Yintoni enxiba iiflethi ezimhlophe ze-ballet?
UGigi Hadid utshitshise abalandeli ngokuxhamla ngokweqile kwisethi yekhalenda Uthando